Wasiirka waxbarashada XFS oo Dhagax dhigay dhismaha Dugsiga sare ee Degmada Ceelbarde – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiirka waxbarashada XFS oo Dhagax dhigay dhismaha Dugsiga sare ee Degmada Ceelbarde
Muqdisho-(SONNA)-Wasiirka waxbarshada iyo tacliinta sare, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Maanta Dhagax-dhigay Dugsi sare oo ay yeelaneyso Degmada Ceel-barde oo ka tirsan Gobolka Bakool.
Mudane; Goodax oo uu socdaalkiisa ku wehliyo Xildhibaan; Cabdulwahaab Ugaas Khaliif oo ka tirsan mudanayaasha Golaha Shacabka ee Barlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka mahad celiyeen sidii diirranayd ee halkaasi loogu soo dhoweeyay.
Wasiirka Waxbrashada iyo tacliinta sare ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya , Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in Iskuulkan ay Maanta Dhagax-dhigeen uu ahmiyad weyn u leeyahay Dadka ku dhaqan Degmada Ceel-berde iyo nawaaxigeeda.
Degmada Ceel-berde ayaa lahayd Dugsi hoose dhexe oo kaliya, iyagoo Ardayda halkaasi kasoo baxdana ay waxbarsho sare u doonan jireen Degmada Xuddur ee Caasimadda Gobolka Bakool iyo meelo kale, waxanay Bulshada halkaasi ku dhaqan aad u bogaadiyeen Dhagax-dhigga Iskuulka cusub ee laga hirgelinayo Ceel-barde.